Fikambanana Zama Alaotra Andriamasimanana Aureline no voafidy ho Reny mpiahy
Afrobasket 2021 Vondrona E - Zimbabwe Firenena sisa no handray anjara manomboka anio
Hanomboka anio talata 21 janoary 2020 any Bulawayo Zimbabwe ka tsy hifarana raha tsy amin’ny faha-25 janoary ho avy izao ny fifanintsanana ao amin’ny vondrona E hahazoana miatrika ny Afrobasket 2021 hotontosaina any Rwanda
Tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo no nifampiarahaba nahatratra ny taona vaovao teny amin’ny "Cercle Mess Mixte Fort Duchèsne" ireo mpikambana ao amin'ny ZAMA (Zanak'i Manakambahiny Andrefana) avy any amin'ny faritra Alaotra.
Ankoatra ny korana sy fiaraha-nisakafo mahazatra ary mba ahafahana mampandroso marina ny tany niaviana sy ho fitsinjovana ara-tsosialy an’ireo mpila ravinahitra eto Antananarivo dia nohavaozina ny birao mpitantana ny fikambanana. Nampidirina ho mpitantana amin'io birao vaovao io avokoa ny taranak'ireo raiamandreny tsy ankanavaka any an-tanànan'i Manakambahiny Andrefana. Mbola ny filoha am-perinasa hatrany no mitantana ny fikambanana. Nofidian'ireo mpikambana rehetra ho Reny mpiahy ny ZAMA kosa Rtoa Andriamasimanana Aureline solombavambahoaka teo aloha izay mbola hifaninana amin'ity fe-potoana manaraka (2019-2024) ity. Tsy nanda ny adidy goavana napetraka aminy Rtoa Aureline ary nanolotra avy hatrany lelavola roa tapitrisa ariary entina hampihodinana ny fikambanana.